၂၅ နှစ်ကျော်မမတွေ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးမိတ်ကပ်ကို ဘယ်လိုလိမ်းကြမလဲ? - For her Myanmar
၂၅ နှစ်ကျော်မမတွေ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးမိတ်ကပ်ကို ဘယ်လိုလိမ်းကြမလဲ?
တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့အလှကို မတ်မတ်တို့အရွယ်မှာ ဖန်တီးရမှာနော်
အမှန်တော့ အိုဗာ ၂၅ ဆိုတာ ဘာမှကြီးတဲ့အသက်အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာကိစ္စ ဇွတ်ကြီးခိုင်းနေလဲဆိုတာ နားကိုမလည်နိုင်ပါဘူးအေ။ (တချို့ကျတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုက ဇွတ်ကြီးချင်ကြတာ မတတ်နိုင်ပု။) ဆိုပေမဲ့လည်း အယ်ဒီတာမမက ၂၅နှစ်ကျော် မတ်မတ်တွေအတွက် တည်ငြိမ်တဲ့မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းကို ရေးပေးပါဦးဆိုပြီး တောင်းဆိုလာတော့လည်း ရေးပေးရတာပဲ။ ကဲ စကားတွေမရှည်တော့ဘူး စပါပြီဗျား…
ဖောင်ဒေးရှင်းကို ပြောတာပါအေ။ ၂၅ ဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Collagen နဲ့ Elastin (ကော်လဂျင်နဲ့ အသားအရေကို တင်းရင်းစေတဲ့ဓာတ်) လျော့နည်းလာပြီမို့ ကိုယ့်မူရင်းအားကို စွဲတင်းထားသလိုဖြစ်စေတဲ့ မိတ်ကပ်အခြောက် (Matte) မိတ်ကပ်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအစား အဆီပါတဲ့ ခပ်ပြောင်ပြောင်မိတ်ကပ်ကို အသုံးပြုတာမျိုး၊ အကယ်၍ အဆီပြန်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်း ရေဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့ မိတ်ကပ်အရည်တွေသုံးတာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။ မဖြစ်မနေပေါင်ဒါသုံးရမယ်ဆိုရင်လည်း အမှုန့်ကိုပဲ ခပ်ပါးပါးလေးသုံးပေးပါနော်။
(၂) ပါးနီ၊ Highlight နဲ့ ပါးရိုးချတာ။
အကုန်သုံးလို့ရပါတယ်နော်။ နင်မိတ်ကပ်တွေအရမ်းများလွန်းတယ် ကိုယ့်အသက်လည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါဦး ဆိုတဲ့စကားတွေကို အဝေးကိုပဲလွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ဝယ်လိမ်းတာပဲကို။ ဒါမဲ့ တစ်ခုသတိထားရမှာက ခုနကပြောသလိုပဲ ပေါင်ဒါတွေက ကိုယ့်မျက်နှာကို ပိုအိုသယောင်ဖြစ်စေတာမို့ ခရင်မ်အမျိုးအစားလေးတွေသုံးပါ။ ခရင်မ်တွေသုံးရင်လည်း ကိုယ်က Blend မတော်တစ်လှမ်းမို့ သေချာတော့ Blend ရမယ်နော်။
Related Article >>>ချင်းကို သုံးပြီး ဆံပင်သန်အောင် လုပ်ကြမယ်
အသားရောင် ရှဲဒိုးနဲ့ ခပ်ထူထူလေးကော့ထားတဲ့မျက်တောင်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့အသွင်လေးကို ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ညပါတီတက်ရင်တော့ Cat eye လို့ခေါ်တဲ့ ကြောင်မျက်လုံးက အသက်ပဲပေါ့။ အဓိကက မျက်လုံးခြယ်မယ့်အရောင်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ အမည်းတွေအရမ်းများလွန်းနေတာ၊ လိုင်နာကြီးတွေပြူးပြဲထွက်နေတာမျိုး မဟုတ်ရင်ပြီးတာပါပဲနော်။
တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့မမဖြစ်ချင်လွန်းလို့ အားနေ Nude အရောင်ပဲဆိုးနေရင်တော့ မင်းအရမ်းမှားလိမ့်မယ်ကောင်မလေး။ တစ်ခါတလေတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရဲရင့်ပြီး ထက်မြက်တဲ့အသွင်ကို ဆောင်စေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ရင့်လေးတွေကို ဆိုးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ အနီရောင်ရင့်ရင့် (သို့) ကြက်သွေးရောင်လို အရောင်မျိုးပေါ့။ နောက်ပြီး အရမ်းခြောက်လွန်းတဲ့ Matte တွေအစား Tint (သို့မဟုတ်) Gloss အမျိုးအစားလေးတွေ ရွေးပေးရင်တော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ (ကိုယ်လည်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တာပေါ့။)
Related Article >>>ဆံပင်ပါးတဲ့ယောင်းတွေအတွက် Hair styling လုပ်နည်း (၅) နည်း
မျက်ခုံးကတော့ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝဆန်ဆန်နဲ့ အမွေးလေးတွေဖြာထွက်နေတဲ့ မျက်ခုံးက ပိုပြီးမျက်စိထဲမှာတင့်တယ်တာမို့ မျက်ခုံးကိုတော့ သေချာပုံသွင်းပြီး ပေါင်ဒါမှုန့်လေးနဲ့ပဲ လိုတဲ့နေရာတွေမှာ လိုက်ဖြည့်ဆွဲပါ။ အဆုံးသတ်မှာ မျက်ခုံး cara လေးသုံးပြီး မျက်ခုံးတစ်မွေးချင်းစီကို ပြန်ဖြီးပေးဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့။
အသက် ၂၅ နှစ်အထက်ဆိုတာ အသားအရေက အဆီထွက်တဲ့နှုန်းနည်းတာ၊ အသားအရေနည်းနည်းလျော့တွဲတာ၊ မျက်လုံးနားလေးမှာ အရေးအကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးလေး ထွက်လာတာကလွဲရင် ကျန်တာဘာမှသိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ (ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ ကိုယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့နော်။) အဲဒါကြောင့် နင်အသက်ကြီးနေပြီ မိတ်ကပ်ကိုလျှော့လိမ်းလို့လာပြောရင် ခပ်ချေချေပဲ မျက်လုံးပင့်တင်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ မိတ်ကပ်မှာ စည်းကမ်းဆိုတာမရှိပါဘူး။ Makeup is your own kingdom ပါ။ မိတ်ကပ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထီးနန်းပါပဲ။ မင်းသမီးလုပ်ချင်လား ဧကရီလုပ်ချင်လားဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ပေါ့။
တညျငွိမျရငျ့ကကျြတဲ့အလှကို မတျမတျတို့အရှယျမှာ ဖနျတီးရမှာနျော
အမှနျတော့ အိုဗာ ၂၅ ဆိုတာ ဘာမှကွီးတဲ့အသကျအရှယျလညျးမဟုတျဘဲနဲ့ ဘာကိစ်စ ဇှတျကွီးခိုငျးနလေဲဆိုတာ နားကိုမလညျနိုငျပါဘူးအေ။ (တခြို့ကတြော့ သူတို့ကိုယျတိုငျကိုက ဇှတျကွီးခငျြကွတာ မတတျနိုငျပု။) ဆိုပမေဲ့လညျး အယျဒီတာမမက ၂၅နှဈကြျော မတျမတျတှအေတှကျ တညျငွိမျတဲ့မိတျကပျလိမျးနညျးကို ရေးပေးပါဦးဆိုပွီး တောငျးဆိုလာတော့လညျး ရေးပေးရတာပဲ။ ကဲ စကားတှမေရှညျတော့ဘူး စပါပွီဗြား…
ဖောငျဒေးရှငျးကို ပွောတာပါအေ။ ၂၅ ဆိုတာဘာပဲဖွဈဖွဈ Collagen နဲ့ Elastin (ကျောလဂငျြနဲ့ အသားအရကေို တငျးရငျးစတေဲ့ဓာတျ) လြော့နညျးလာပွီမို့ ကိုယျ့မူရငျးအားကို စှဲတငျးထားသလိုဖွဈစတေဲ့ မိတျကပျအခွောကျ (Matte) မိတျကပျတှကေို ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ အဲဒါတှအေစား အဆီပါတဲ့ ခပျပွောငျပွောငျမိတျကပျကို အသုံးပွုတာမြိုး၊ အကယျ၍ အဆီပွနျတတျတယျဆိုရငျလညျး ရဓောတျကိုအခွခေံပွီးထုတျထားတဲ့ မိတျကပျအရညျတှသေုံးတာမြိုးလုပျသငျ့ပါတယျ။ မဖွဈမနပေေါငျဒါသုံးရမယျဆိုရငျလညျး အမှုနျ့ကိုပဲ ခပျပါးပါးလေးသုံးပေးပါနျော။
(၂) ပါးနီ၊ Highlight နဲ့ ပါးရိုးခတြာ။
အကုနျသုံးလို့ရပါတယျနျော။ နငျမိတျကပျတှအေရမျးမြားလှနျးတယျ ကိုယျ့အသကျလညျးကိုယျပွနျကွညျ့ပါဦး ဆိုတဲ့စကားတှကေို အဝေးကိုပဲလှငျ့ပဈလိုကျပါ။ ကိုယျ့ပိုကျဆံနဲ့ကိုယျဝယျလိမျးတာပဲကို။ ဒါမဲ့ တဈခုသတိထားရမှာက ခုနကပွောသလိုပဲ ပေါငျဒါတှကေ ကိုယျ့မကျြနှာကို ပိုအိုသယောငျဖွဈစတောမို့ ခရငျမျအမြိုးအစားလေးတှသေုံးပါ။ ခရငျမျတှသေုံးရငျလညျး ကိုယျက Blend မတျောတဈလှမျးမို့ သခြောတော့ Blend ရမယျနျော။
Related Article >>>ခငျြးကို သုံးပွီး ဆံပငျသနျအောငျ လုပျကွမယျ
အသားရောငျ ရှဲဒိုးနဲ့ ခပျထူထူလေးကော့ထားတဲ့မကျြတောငျက ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ ကကျြသရရှေိတဲ့အသှငျလေးကို ဆောငျပေးပါလိမျ့မယျ။ ညပါတီတကျရငျတော့ Cat eye လို့ချေါတဲ့ ကွောငျမကျြလုံးက အသကျပဲပေါ့။ အဓိကက မကျြလုံးခွယျမယျ့အရောငျကို ရှေးခယျြတဲ့အခါ အမညျးတှအေရမျးမြားလှနျးနတော၊ လိုငျနာကွီးတှပွေူးပွဲထှကျနတောမြိုး မဟုတျရငျပွီးတာပါပဲနျော။
တညျငွိမျရငျ့ကကျြတဲ့မမဖွဈခငျြလှနျးလို့ အားနေ Nude အရောငျပဲဆိုးနရေငျတော့ မငျးအရမျးမှားလိမျ့မယျကောငျမလေး။ တဈခါတလတေော့ ကိုယျ့ရဲ့ရဲရငျ့ပွီး ထကျမွကျတဲ့အသှငျကို ဆောငျစမေယျ့ နှုတျခမျးနီအရောငျရငျ့လေးတှကေို ဆိုးလို့ရပါတယျ။ ဥပမာ အနီရောငျရငျ့ရငျ့ (သို့) ကွကျသှေးရောငျလို အရောငျမြိုးပေါ့။ နောကျပွီး အရမျးခွောကျလှနျးတဲ့ Matte တှအေစား Tint (သို့မဟုတျ) Gloss အမြိုးအစားလေးတှေ ရှေးပေးရငျတော့ ပိုပွီးအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ (ကိုယျလညျး သကျတောငျ့သကျသာဖွဈတာပေါ့။)
Related Article >>>ဆံပငျပါးတဲ့ယောငျးတှအေတှကျ Hair styling လုပျနညျး (၅) နညျး
မကျြခုံးကတော့ ဘယျအသကျအရှယျမှာပဲဖွဈဖွဈ သဘာဝဆနျဆနျနဲ့ အမှေးလေးတှဖွောထှကျနတေဲ့ မကျြခုံးက ပိုပွီးမကျြစိထဲမှာတငျ့တယျတာမို့ မကျြခုံးကိုတော့ သခြောပုံသှငျးပွီး ပေါငျဒါမှုနျ့လေးနဲ့ပဲ လိုတဲ့နရောတှမှော လိုကျဖွညျ့ဆှဲပါ။ အဆုံးသတျမှာ မကျြခုံး cara လေးသုံးပွီး မကျြခုံးတဈမှေးခငျြးစီကို ပွနျဖွီးပေးဖို့လုံးဝမမပေ့ါနဲ့။
အသကျ ၂၅ နှဈအထကျဆိုတာ အသားအရကေ အဆီထှကျတဲ့နှုနျးနညျးတာ၊ အသားအရနေညျးနညျးလြော့တှဲတာ၊ မကျြလုံးနားလေးမှာ အရေးအကွောငျးနညျးနညျးပါးပါးလေး ထှကျလာတာကလှဲရငျ ကနျြတာဘာမှသိသိသာသာ ပွောငျးလဲသှားတာမြိုးလညျးမရှိပါဘူး။ (ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကတော့ ကိုယျထိနျးသိမျးတဲ့အပျေါမှာ မူတညျတာပေါ့နျော။) အဲဒါကွောငျ့ နငျအသကျကွီးနပွေီ မိတျကပျကိုလြှော့လိမျးလို့လာပွောရငျ ခပျခခြေပြေဲ မကျြလုံးပငျ့တငျပွီး ကွညျ့လိုကျပါ။ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျဖို့က အရေးအကွီးဆုံးပါပဲ။ မိတျကပျမှာ စညျးကမျးဆိုတာမရှိပါဘူး။ Makeup is your own kingdom ပါ။ မိတျကပျဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့ကိုယျပိုငျထီးနနျးပါပဲ။ မငျးသမီးလုပျခငျြလား ဧကရီလုပျခငျြလားဆိုတာတော့ ကိုယျ့ဘာသာဆုံးဖွတျပေါ့။
Tags: 25, Age, girls, glow, limit, makeup, No, Over
အနောက်တိုင်းသားတွေ ပြောစမှတ်တွင်ကြတဲ့ ခေါင်းပြတ်မြင်းစီးတစ္ဆေကြီး
Hnin Ei Oo April 22, 2019
မိုးတွင်းဘက် ရုံးသွားတဲ့အခါ သူမတူဘဲ အလှထူးနေစေဖို့ ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ
ချွေးပေါက်ကို ပိုကျယ်စေတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းအမှား (၅) ခု
Stella June 3, 2019
face massage ကို အိမ်မှာတင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် အဆင့်(၆)ဆင့်
Stella May 23, 2019
ဆံပင်တိုတဲ့မ်ိန်းကလေးတွေသာ သိနိုင်မယ့် ပြဿနာ(၅)မျိုး
Christina Rosy May 3, 2019
Double Cleansing နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေ ရလာပါလိမ့်မယ်..
Yin Sandi Ko April 29, 2019
မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့အတွက် အသက်ကြီးတယ်ဆိုတာ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါဘူး။
Hnin Ei Oo April 26, 2019